Tenga Yakakwira Potency Powder & Inodzivirira iyo Chiropa Yakagadziriswa 20: 1 Maral Root Rhaponticum Carthamoides - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Yakakwira Potency Powder & Inodzivirira iyo Chiropa Yakagadziriswa 20: 1 Maral Root Rhaponticum Carthamoides
$99.99 Regular price $110.99
ruvara 500g 1000g 100 d 200g
500g 1000g 100 d 200g
Yakakwira Potency Powder & Inodzivirira iyo Chiropa Yakagadziriswa 20: 1 Maral Root Rhaponticum Carthamoides - 500g yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Kudya: Echinacea Bvisa Poda
Uwandu: 1 bhegi
Muenzaniso Nhamba: 31203
MARAL Midzi yakadzika 20: 1 kubvisa
Mutsva batch 2021
Yakakurudzirwa muyero: 1g. zuva nezuva
"Maral Root iguru kune Athletic Performance, Kuvaka Lean Muscle Misa, Yakakura kune Kurasikirwa Kwehuremu, Inowedzera Up Metabolism, Hapana Side Side Mhedzisiro, uye nezvimwe zvakawanda."
Maral Root yaizivikanwawo seRhaponticum carthamoides uye leuzea hazvisi izvo zvinozivikanwa - asi iri kuwana mukurumbira uye ichijairika. Asi Maral mudzi wakashandiswa kwezviuru zvemakore muChechi Chinese Mushonga. Uye inoonekwa senge yakasimba toni yemiriwo yekuwedzera hupenyu isina mhedzisiro.
Inesimba Adaptogen - Maral mudzi wakakura adaptogen senge ashwagandha, Rhodiola rosea uye mamwe akawanda ane simba emakwenzi emagetsi. Zvese izvi zvinobatsira muviri kubata nekushushikana kwepanyama uye kwepfungwa.
Inosanganisira - Maral midzi ine akawanda adaptogenic macomputer uye flavonoids, lignins, mavitamini, matanini, phytoecdysones, alkaloids, uye organic acids.
Inowedzera Lean Muscle Mass - Zvidzidzo muRussia zvakaratidza kuti Maral midzi isimba rine simba adaptogen inobatsira muviri kuburitsa yakawandisa mhasuru mhasuru. Saka vatambi vanopindura zvirinani kuita maekisesaizi nekuti Maral midzi ine ecdysterone misanganiswa inoburitsa mhedzisiro yakafanana nesteroid asi isina mhedzisiro.
Inovandudza O2 Yekutakura - Maral midzi zvakare inowedzera kugona kwehemoglobin yedu kutakura yakawanda oksijeni nokudaro ichitipa isu kukosha kwekuwedzera kwesimba.
Inodzivirira Chiropa - Maral midzi inobatsirawo kuchengetedza chiropa kubva kune chepfu nekudaro zvichibatsira kusimudzira simba uye kusimba.
Yakanaka kune Nani Kujeka Kwepfungwa - Maral midzi chinhu chine simba mumiririri icho chinobatsirawo kugadzirisa kugona kwekuziva uye kugadzira nani kujekesa kwepfungwa nekuziva.
Inobatsira neFet Metabolism - Maral midzi inobatsirawo muviri kugadzirisa mafuta nekudaro uchibatsira nekurema uremu.
Inowedzera Up Immune System - Maral midzi inobatsirawo kusimudzira masimba edu ekudzivirira muviri uye kudzivirira dzihwa, dzihwa, uye zvimwe hutachiona.
Inoderedza Kushushikana - Muzuva rino nezera, chero chinhu chinogona kubatsira kudzikisira kushushikana senge Maral midzi yakakosha.
Inovaka Itsvo Yin - MuChinese Mushonga, Maral midzi inobatsira kuvaka yakawanda itsvo yin uye nekudaro inobatsira kudzorera muviri uye kupora kubva kunetseka.
MuAyurvedic Mishonga muIndia - MuAyurvedic Mishonga Maral midzi inobatsira kudzora maitiro eVata, kubvisa pitta yakawandisa, uye kuenzanisa Kapha.
Antimicrobial - Maral midzi inouraya mamwe marudzi ehutachiona uye fungal hutachiona.
Inobatsira neAnemia - Maral midzi inowedzera kugadzirwa kwemasero matsvuku uye machena eropa.
Inoshanda Yakakura Yekushushikana - Zvidzidzo nemhuka zvinoratidza kuti Maral midzi inoshanda zvakanyanya pakurapa kunetseka.
Inovandudza Kutenderera - Maral midzi zvakare inovandudza kutenderera mumhasuru, huropi, uye kunyangwe kune yemoyo tishu.
Mamwe Simba - Maral midzi inogadzira glutamate decarboxylase pamwe neacetylcholine esterase muuropi uye nemuviri wese kubatsira kuburitsa yakawandisa ATP kune mamwe simba uye simba.
Insulin Kugadzira - Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza zvakare kuti Maral midzi inogona zvakare kuvandudza kugadzirwa kwe insulin
Anti-kuzvimba - Maral midzi zvakare inobatsira kuregedza kugadzirwa kweInhibits Nuclear Factor kappa B inova chikamu chekuputika kutenderera. Saka kubatsira kubvisa kuzvimba.
Iine akawanda maAntioxidants - Maral midzi zvakare ine yakasimba antioxidants iyo inobatsira kudzivirira uye kuporesa DNA kukuvara uye nekudaro kudzivirira uye kuporesa zvirwere.
Kubva paongororo dze 3
Hunhu Hukuru, ndatenda, ndagutsikana nekutenga kwangu
Zuva reodha 9-5-21 kusvika muCanary Islands 23-6-21 yakatora nguva yakareba kuti isvike, yakachengetedzwa kubva kuChiedza zvakare Bubble Bag thanks⭐⭐⭐